Uwe nke charros ma obu mariachis na omenaala ha | Akụkọ Njem
Maria José Roldan | | America, Mexico DF
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịmụta banyere uwe nke charros na mariachis, anyị ga-ebu ụzọ mata ihe ha bụ. Mariachi bu akara nke Mexico na ndi raara onwe ha nye ka ha buru ndi igbo ka ha were obi oke onu na obi gi di nma. Ọ bụ ezie na ha malitere na steeti Jalisco, taa ị nwere ike ịnụ ụtọ egwu ha ebe ọ bụla na mbaA na-ahụkwa ha n'ụzọ dị mfe ekele maka uwe ha, akwa ha, okpu sara mbara na akwa mkpuchi na uwe ha.
A na-anụkarị mariachi na ememe Mexico na ụdị a enyerela ndị ama ama aka. Mariachis bu omenala ndi Mexico nke onye obula nwere obi uto na oburu na ị gha njem Mexico, ama m na you gha acho iru.
1 Uwe ejiji oge ochie
2 Mmalite nke charros
3 Enwere Mariachis naanị na Mexico?
4 Ọchịchọ ịmata banyere ejiji nke mariachis
5 Mmalite nke mariachis
6 Ngwa Mariachi
7 Mariachi egwu
8 Mariachis taa
Uwe ejiji oge ochie
Na mbu ndi mariachis yi ekike ejiji nke ime obodo Jalisco ma ha nwere blanket owu na ahịhịa nwere ahịhịa nkwụ dịka okpu, mana emesịa ha malitere iyi “charro” nke ahụ bụ ehi, dị ka onye na-agba ịnyịnya. Uwe ejiji nke "charro" ahụ nwere jaket dị mkpụmkpụ ma dị elu, uwe ogologo ọkpa ojii, mana ndị mariachis etinyela mgbanwe na ọcha na uwe ahụ.
Mmalite nke charros
E kwenyere na uwe ndị ahụ na-esi na charro sitere na obodo Spanish nke Salamanca, ebe ọ bụ na a kpọrọ ndị bi na ya "charros". N'ime ógbè a, osimiri Tormes na Ciudad Rodrigo bụ mpaghara a na-akpọ Campo Charro, na mpaghara a, ejiji ka mma bụ nke nwa ojii, nke nwere obere jaket nwere obere akpụkpọ ụkwụ. Okpu okpu eji eme nke yiri Mexico, nwere obere nku, ma nke yiri ya bu ihe ngosi.
Enwere Mariachis naanị na Mexico?
Nke bụ eziokwu bụ na n'oge a ị nwere ike ịchọta Mariachis n'ọtụtụ mba na-abụghị Mexico dị ka Venezuela, ebe ha nwekwara oke ama. Na United States enwerekwa ọtụtụ ndị omempụ n'ihi ọtụtụ ndị kwabatara Mexico ndị kpebiri ịkwaga ebe ahụ. Na Spen ha bụkwa ndị a ma ama ebe ọ bụ na ọ ga-ekwe omume ịchọta otu dị iche iche n'obodo dị iche iche na-egwu egwu ma na-abụ abụ ndị a na-ahụkarị, na-eto n'okporo ámá obodo ahụ.
Ọchịchọ ịmata banyere ejiji nke mariachis
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịchọpụta ụdị ejiji ndị Mexico, dịka m kwuru n'elu, ị ga-amalite site na ịmara ụfọdụ uwe ejiji kachasị mma n'ụwa: uwe nke Charro (nwa ehi Mexico) nke na-atọ anyị ụtọ egwu mariachi, nke sitere na steeti Jalisco, ebe mara amara nke tequila. Anyị na-abanye na akụkọ ntolite, anyị ga-amata na na mbido narị afọ nke XNUMX, ejiji charro, dabere na nke hacienda si bịa, dịgasị iche na agba, ọdịdị, ihe eji, n'etiti ndị ọzọ.
Ndị nwere ego karịa, na-eyi uwe ndị eji ajị anụ mee, na ihe ịchọ mma ọlaọcha, na ndị kacha dịrị umeala n'obi na-eyi suede suut. Mgbe mgbanwe nke Mexico, e guzobere uwe ahụ maka onye ọ bụla, n'okpuru baroque aesthetic. N'oge a, uwe a na-adọrọ adọrọ, nke dịgasị iche dịka oge ahụ, nwere jaket mara mma, uwe ogologo ọkpa ma dabara adaba (nke na-eme ka ụfọdụ ụmụ nwanyị nwee obi ụtọ), uwe elu, akpụkpọ ụkwụ nkwonkwo ụkwụ na uwe. Ndị a kwesịrị ịdị iche na frets, na ihe ịchọ mma ọlaọcha ndị ọzọ (ma ọ bụ ihe ndị ọzọ). Akpụkpọ ụkwụ ga-abụ agba nke sadulu ahụ, ma ọ bụ mmanụ a honeyụ ma ọ bụ aja aja, belụsọ ma a na-eyi ya na olili ozu, nke ga-abụ oji. Uwe elu ejiri mee ga-acha ọcha, ma ọ bụ na-acha ọcha.
Ihe kachasị pụta ìhè bụ okpu, nke ejiri ajị anụ, ntutu bekee ma ọ bụ ihe ndị ọzọ. Ọ na-arụ ọrụ iji chebe charros pụọ na anyanwụ Mexico, na iji chebe ha pụọ ​​na ịnyịnya daa. O kwesiri ekwusi nke ahu Ha abụghị uwe dị ọnụ ala n'ihi na ndị dị ọnụ ala nwere ọnụahịa $ 100.
Mmalite nke mariachis
Mmalite nke mariachi adịghị mfe nchọta. Mariachi bu nchikota nke omenaala nke megoro na Mexico n’ari aro gara aga ma obu karie. Ọ bụ ezie na ụmụ amaala Mexico na-eji ọjà, ịjà, na opi egwu, onweghi ezi nmekorita n’etiti egwu ndi amaala na mariachi.
Ọ bụ ndị Spen webatara ngwa ndị mbụ mariachi tinyere uwe ha: violins, guitar, vihuelas, harp, wdg. Echere na a ga-eji ihe ndị a mee ihe n'oge ọha mmadụ, mana criollos (ndị Mexico nwere agbụrụ Spanish) bidoro iji ha na-eme egwu na-ewu ewu (nke na-ewute ndị ụkọchukwu ebe ọ bụ na a na-esoro ha n'egwuregwu ndị na-asọ oyi, satirical ma ọ bụ anticlerical oge).
Egwu Mariachi gara nke ọma maka ndị masịrị ihe ha nụrụ, crillos nke narị afọ nke iri na itoolu mere ihe niile nwere ike ime iji kwụsị njedebe nke ọnụnọ ndị Spain na Mexico na n'ime nke a, ha kwadoro egwu mariachi.
Mariachis nwere ike iyi uwe ndị ọrụ ọdịnala, uwe ogologo ọkpa, uwe elu na okpu ahịhịa, na mgbe ha gara ịchọ ọrụ dị ka mariachi ha nwere ike nweta ihe karịrị nkezi ọrụ na ọha mmadụ. Ọ bụ ezie na ugbu a wii wii enweghịzi otu ọnọdụ ahụ ọtụtụ iri afọ gara aga, nke bụ eziokwu bụ na a ka ji ha kpọrọ ihe nke ukwuu ma ha na-eyi uwe ha ma na-abụ abụ na nnukwu obi ụtọ.
Ndị mariachis, egwu ha na uwe ha mara n'ụwa niile ọ bụghị naanị na Mexico, na ebe dịka Europe, Japan ma ọ bụ n'akụkụ ọ bụla ọzọ nke ụwa. Dị ọdịbendị a na-ewu ewu na akụkọ ihe mere eme nke Mexico, A na-eme ememme ya na Septemba ọ bụla ebe ihe niile sitere: na Jalisco.
Site ugbua gaba oburu na imaghi ihe mariachis bu, omenala ha na uwe ha, ugbua igha eme ya. ̀ ga-achọ ịhụ ka ha na-ebi ugbu a? Ọ bụ nnukwu ihe ngosi ị ga-achọ ịnụ ụtọ!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Mexico DF » Uwe nke charros ma ọ bụ mariachis: omenala ndị Mexico